Taageerayaasha Oo Banaanbax Sameeyay Iyo Tuchel Waxa Uu Ka Yiri Barbarihii Brighton – Garsoore Sports
Taageerayaasha Oo Banaanbax…
Akhbaartii ugu weyneyd ee wararka kooxda Chelsea ee warbaahinta ma’ahayn barbarihii gool la’aanta ahaa oo ay Brighton iyo Hove Albion kula gashay garoonka Stamford Bridge. Balse waxay jamaahiirta kooxda dhegta u raaricinayeen wararka sheegaya in kooxdu ay isku diyaarinayso inay ka baxdo European Super League wax ka yar 48 saacadood kaddib markii la xaqiijiyay booskooda tartanka, inkastoo xilli-dambe ay xaqiijiyeen ka bixistooda.
Hayeeshee, ku dhowaad 1000 jamaahiirta Blues ah ayaa Mudaaharaad ay sameeyeen ciyaarta kahor, waxaana looga fursan waayay in goolhayahoodii hore ee Petr Cech uu u yimaado si uu ula hadlo banaabaxayaasha, iyadoo dhanka kalena tababaraha kooxda Blues uu dib u dhac ku yimid, ciyaar dib u dhac uu ku yimid 15 daqiiqo.
Kooxda Chelsea ayaa aad u liidatay cayaartii ay la cayaarta kooxda Brighton waxaana uu tababare Tuchel ku macneeyay ‘cidhiidhi maskaxeed oo la xiriirta European Super League’.
Tuchel oo cayaarta kaddib la hadlay saxaafada ayaa yidhi “Qof kasta oo ka shaqeeya kooxdan wuxuu jecel yahay tartankan. Daacaddii, labadii saac ee la soo dhaafay kama aanan fikirin Super League laakiin dhammaan su’aalaha ayaa ku saabsan tartankaas. Waana ka xumahay inaanan helin maalin wanaagsan, Kama fekerayo mowduuc kale”
Tuchel oo ka hadlaya bandhigii kooxdiisa ayaa yiri “ma aanan abuurin xaalado tiro badan oo ka hortagga cadaadiska ah. Taasi waa sababta ay u ahayd ciyaar adag, waan yara daalnay maskax ahaan iyo jir ahaanba.”